पाथिभरा माताको दर्शनगरी कात्तिक १ गते सोमवारको राशिफल हेर्नुहोस् – Khabar Silo
मेषः आफन्त तथा साथी भाईसँग राय नमिल्दा दैनिक कामहरु प्रभावित हुन सक्छन् । राजनीति तथा समाजसेवामा समय खर्चिनेहरुले काम गर्दा ध्यान दिनुहोला । निर्णय गर्न नसक्दा हातमा आईसहेको काम अरुले नै फुत्काउनेछन् । घरजग्गा तथा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला विवाद तथा किचलो हुनसक्छ । तरपनि अध्ययन तथा खोजीमुलक क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ । शेयर बजार तथा व्यापारमा गरेका लगानी फस्टाएर जानेछ ।
वृषः न्यालयसँग सम्वन्धीत कामहरु थाँती राख्नुहोला । खेलकुद तथा पराक्रमी क्रिर्याकलापमा भाग लिने अवसर आएपनि भनेजस्तो नतिजा निकाल्न मुस्किल पर्नेछ । बन्धुबान्धब हरुसँग मनमुटाव सिर्जना हुनेछ भने सैद्धान्तिक राय बाजिनेछ । समय मध्ययम रहेकोले चोटपटक लाग्ने तथा स्वास्थ्यमा समस्या देखापर्नेछ । पढ्ने लेख्ने काममा मन नजानाले अरुभन्दा पछी परिनछ ।
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, कार्तिक २९ गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Posted on November 14, 2021 Author khabar silo
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल कार्तिक २९ गते सोमबार इश्वी सन २०२१ नोभेम्वर १५ तारीख कार्तिक शुक्लपक्ष एकादशी तिथी उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र वज्र योग भद्रा करण चन्द्रमा मिन राशिमा आनन्दादि योगमा गद योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन शरद ऋतु हरिवोधनी एकादशीव्रत, भीष्मपञ्चकारम्भ,खोटाङवराहपोखरी, वराहक्षेत्रधर्मीक मेला प्रारम्भ, तुलसी विवाह, मकवानपुर भैसे त्रिखण्डेश्वर महादेव मेला (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष […]
आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल श्रावण ७ गते बुधबार इश्वी सन २०२० जुलाई २२ तारीख श्रावण शुक्लपक्ष द्वितीया तिथी अष्लेषा नक्षत्र सिद्धि योग वालव करण चन्द्रंमा कर्कट राशिमा आनन्दादि योगमा राक्षस योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) भौतिक श्रोत साधनको […]
आज २०७७ मंसिर २ गते मंगलबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- मेष उपहार प्राप्त होला ।बादबिवादमा तपाईँकै जित होला । शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । मिष्ठान्न भोजन […]